Dhibaatooyinka Farsamada, Fadlan Istaag | Martech Zone
Sabtida, Diisambar 30, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Marka la eego boggeyga arjiga, sida muuqata waxaan wax ka beddelay dulucdeyda illaa iyo hadda in aysan u sii shaqeyneyn sidii markii hore loogu talagalay Meelo jilicsan mawduuca beta. Wax fikrad ah kama haysto markii aan sameeyay, laakiin waxay hoos u dhacday dhowr toddobaad hadda. (Psst… hey Squible guys… fadlan si dhakhso leh wax u bilow… weligaa beta waligaa ha noqon!)
Waxaan isku dayay tiro badan oo ah WordPress plugins oo loogu talagalay kaydinta. Qaar ka mid ah waxay ahaayeen kuwo quruxsan oo soo jiidasho leh, sida kuwa Simile plugin timeline. Waan sii waday oo waan shaqeynayay xalay laakiin waxaan ogaaday inay ku dhajisay DHAMMAAN qoraallada hal mar oo dil ah. Argh.
Waxaan ku hayaa wax ka badan 300 fariimo boggan si markaa ay u dhisi lahayd codsi faylal bahal ah qof kasta oo booqday. Waxaan wax ka beddelay koodhka xoogaa yar si aan u dhiso farsamo dabool. Taasi waxay tirtirtay dhammaan xogta kaydinta xogta laakiin weli waxay ahayd mid aad u badan oo la xakameyn karo si loogu raro macaamiil kasta. Fikrad ahaan, qalabku waa inuu adeegsadaa farsamo isagoo isticmaalaya La mid ah API inaad dib u soo ceshato dhacdooyinka sida jadwalka loo wareejiyay. Waxaan ku sugi doonaa midkaas!
Natiijo ahaan, waxaan u maleynayaa inaan dhisayo mid ii gaar ah. Waxaan ku ciyaarayaa fikradaha qaarkood oo ku saabsan sida hadda… macquul ahaan ficil nooc geed fiican ah laga bilaabo sannad, bil, iyo dhajin. Waan arki doonaa. Waxaan qabanayaa hawlo badan oo mawduuc ah mashruuc kale dhammaadka usbuuca markaa waan ku noqon doonaa tan.
Dhanka kale, degelkeyga waxaa laga yaabaa inuu ka maqnaado xoogaa hits ah maadaama keydku uusan gurguuraneyn. Waanu soo celin doonnaa kuwaas, in kastoo! Fadlan garab istaag.
Waxaan ahay Nin Bir ah!
Jan 1, 2007 saacadu markay ahayd 5:51 PM
Runtii waan rakibay kan sidoo kale. Waxaan isku dayayaa inaan helo wax waxyar uun dhammaystiran… fiiri http://binarybonsai.com/archives/
Waa quruxsan tahay.